ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်သားတွေကို ထိုင်းဘက်က ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရိက္ခာပစ္စည်းတွေ မကြာခဏဆိုသလို ဖမ်းမိနေတာ အား လုံးသိကြပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ မြန်မာစစ်သားတွေကို ထိုင်းက ဘာကြောင့်ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးနေရသလဲ. . .?ဆိုတဲ့အချက်ကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတာ အမှန်ပါပဲ။ ပရာယွတ် နဲ့ မင်းအောင်လှိုင်ကြားကနောက်ဖေးပေါက်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပရာယွတ်ရဲ့ အတွင်းရေးပိုင်းတွေ သိနေသူဆီကနေ Nikkei Asia က စုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံကလည်း
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကို သဘောကျနေတဲ့နိုင်ငံပါပဲ။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖေဖော်ဝါရီအာဏာသိမ်းပွဲကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း မငြိမ်မသက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဘန်ကောက်သံတမန်ဆက်ဆံရေးမှာ လူမသိ သူမသိ နောက်ဖေးပေါက်သံတမန်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးကြားက လူမသိသူမသိ နောက်ဖေးပေါက်ဆက်ဆံရေးကို ပိုပြီးသိသာထင်ရှားစေတဲ့အချက်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၂၄ ရက် ၊ ဂျကာတာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်
မတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အချက်ပါပဲ။ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယွတ်က သူကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်ဘဲ နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီး Don Pramudwinai ကိုသာ စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပရာယွတ်က မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ မတွေ့ချင်ဘူးလို့ လူတွေမြင်လာအောင်ပုံဖော်ခဲ့ပေ မယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နောက်ပေါက်ဇာတ်လမ်းက လူပြောစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ် နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်အဖြစ် ဧပြီ ၂၄ ရက်က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ၊ ဂျကာတာ မြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ တွေ့ဆုံရမယ့်ခရီးတခုကို
ပရာယွတ်လွဲချော်ခဲ့တယ်လို့ လူထင်စရာဖြစ်ခဲ့ပြီး ပရာယွတ်ကို လည်း လူတွေဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့နှစ်ယောက်ကြားက ဆက်ဆံရေးကိုသိရှိနေသူတယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်အရ မင်းအောင်လှိုင်ကိုတွေ့ဖို့ အတွက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ပရာယွတ် သွားစရာ မလိုဘူး လို့ ပြောပါတယ်။ ပရာယွတ်က စစ်တပ်ကလာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာစစ်တပ်နဲ့နှီးနွယ်ပတ်သက်နေတဲ့ ထိုင်းစစ်တပ်ကရတဲ့ တိုက်ရိုက်အကျိုးအမြတ်တွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကတည်းကစ ပြီး ပရာယွတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
” ပရာယွတ် နဲ့ မင်းအောင်လှိုင် လူချင်းတွေ့စရာမလိုဘဲနောက်ဖေးပေါက်ကတဆင့်ဆက်သွယ်နေကြတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးပုံစံကို ကျနော် တို့ဆက်ပြီး ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစပြီး ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့အတွက် ဘယ်လိုထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာ သူတို့ ၂ ယောက်စလုံးသဘောပေါက်ကြတယ် ” လို့ အဆိုပါ အတွင်းရေးဖောက်ချသူက ပြောပါတယ်။
ဘာတွေ ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတာကိုတော့ အဖြေပေးဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက ထိုင်းဝါရင့်သံတမန်တွေနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအကြား စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့ပြီး ခေါင်း ဆောင်နှစ်ဦးကြားက အသိရခက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားစရာမရှိခဲ့ပါဘူး။ သူတို့အချင်းချင်းကောင်းကောင်းနား လည်နိုင်ကြပြီး ရဲဘော် ရဲဘက်တွေအဖြစ် ယူဆထားကြတယ်လို့. ထိုင်းသံအမတ်ဟောင်း Kobsak Chutikul ကပြောပါတယ်။ ထိုင်း နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်အကြားမှာ
ရာထူးအဆင့်အလိုက်ဆက်ဆံရေးတွေရှိနေပါတယ်။ ဒေသခံတပ်မှူးအချင်းချင်း ၊နယ်စပ်ဒေသတပ် မှူးအချင်းချင်းကနေ ဗဟိုစစ်ဦးစီးဌာနချုပ်ကအမြင့်ဆုံးအဆင့်ထိ ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ ၂၀၁၄ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပရာယွတ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း မင်းအောင်လှိုင်ဟာ ပရာယွတ်ဆီကို ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့ အရှေ့ တောင်အာရှက စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတယောက်ပါပဲ။ ပရာယွတ်ဆိုတာကလည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ရွေးကောက်ခံထိုင်းအစိုးရကိုဖြုတ်ချအာဏာသိမ်းယူခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီး လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုတွေနဲ့
ထိုင်းစစ်တပ်ဘက်ယိမ်းအစိုးရကို ဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါ တယ်။ ထိုင်းစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင် ၂ နှစ်အစောပိုင်းကလည်း မင်းအောင်လှိုင်ကို ထိုင်းဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း Prem Tinsulanonda ရဲ့ မွေးစားသားအဖြစ် ညွှန်းဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို အမြင့်ဆုံးတိုးမြှင့်တဲ့အနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးသူရဲကောင်းဆုဖြစ်တဲ့ ဆင်ဖြူတော် ဂုဏ်ပြုဆု မင်းအောင်လှိုင်ကို ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကတော့ မြန်မာတပ်မတော်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကို ထိုင်းနယ်စပ်တလျှောက်မှာလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားပြီး တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကာလတွေတုန်းကတော့ နှစ်နိုင်ငံစစ်ရေးတင်းမာမှု ကြီးထွားခဲ့တယ်လို့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာသူတဦးက ပြောပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးက တချိန်ကသမိုင်းမှာသင်ကြားခဲ့ရသလို ရန်ငြိုးနဲ့မုန်းတီးမှုမျိုးတွေမဟုတ်တော့ ဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရချည်နှောင်ထားတဲ့ နှောင်ကြိုးအထပ်ထပ်နဲ့ အလွမ်းသင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးအဖြစ် သိသိသာသာပြောင်းလဲလာခဲ့ပါ တော့တယ်။
crd-ဘုန်းမောင် Ref:Nikkei Asia
ဗိုလျခြုပျမူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ နဲ့ ထိုငျးဝနျကွီးခြုပျပရာယှတျ တို့ ရဲ့ လူသူမသိတဲ့ နောကျဖေးပေါကျ ဆကျဆံရေး
ရှတေ့နျးရောကျနတေဲ့မွနျမာစဈသားတှကေို ထိုငျးဘကျက ထောကျပံ့ပေးနတေဲ့ရိက်ခာပစ်စညျးတှေ မကွာခဏဆိုသလို ဖမျးမိနတော အား လုံးသိကွပွီးသားဖွဈမှာပါ။ မွနျမာစဈသားတှကေို ထိုငျးက ဘာကွောငျ့ရိက်ခာထောကျပံ့ပေးနရေသလဲ. . .?ဆိုတဲ့အခကျြကလညျး စိတျဝငျစားစရာကောငျးနတော အမှနျပါပဲ။ ပရာယှတျ နဲ့ မငျးအောငျလှိုငျကွားကနောကျဖေးပေါကျဆကျဆံရေးဆိုငျရာ သတငျးအခကျြအလကျတှကေို ပရာယှတျရဲ့ အတှငျးရေးပိုငျးတှေ သိနသေူဆီကနေ Nikkei Asia က စုံစမျးဖျောထုတျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ တကယျတမျးပွောရမယျဆိုရငျ ထိုငျးနိုငျငံကလညျး
စဈအုပျခြုပျရေး ကို သဘောကနြတေဲ့နိုငျငံပါပဲ။ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့အိမျနီးခငျြးဖွဈတဲ့မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖဖေျောဝါရီအာဏာသိမျးပှဲကွီးဖွဈခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး မွနျမာနိုငျငံတဝှမျး မငွိမျမသကျဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ အဲဒီနောကျပိုငျး ဘနျကောကျသံတမနျဆကျဆံရေးမှာ လူမသိ သူမသိ နောကျဖေးပေါကျသံတမနျဆကျသှယျရေးလမျးကွောငျးကို အသုံးပွုဖို့ဆုံးဖွတျခဲ့ကွပါတယျ။ သူတို့နှဈဦးကွားက လူမသိသူမသိ နောကျဖေးပေါကျဆကျဆံရေးကို ပိုပွီးသိသာထငျရှားစတေဲ့အခကျြကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဧပွီ ၂၄ ရကျ ၊ ဂကြာတာမှာကငျြးပခဲ့တဲ့ အာဆီယံထိပျသီးအစညျးအဝေးကို ထိုငျးဝနျကွီးခြုပျကိုယျတိုငျ
မတကျရောကျခဲ့တဲ့အခကျြပါပဲ။ အာဆီယံထိပျသီးအစညျးအဝေးကိုတုနျ့ပွနျတဲ့အနနေဲ့ ထိုငျးဝနျကွီးခြုပျပရာယှတျက သူကိုယျတိုငျမတကျရောကျဘဲ နိုငျငံခွားရေးဝနျ ကွီး Don Pramudwinai ကိုသာ စလှေတျခဲ့ပါတယျ။ ပရာယှတျက မငျးအောငျလှိုငျနဲ့ မတှခေ့ငျြဘူးလို့ လူတှမွေငျလာအောငျပုံဖျောခဲ့ပေ မယျ့ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ခိုးကွောငျခိုးဝှကျနောကျပေါကျဇာတျလမျးက လူပွောစရာဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ အာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး မငျးအောငျလှိုငျရဲ့ပထမဆုံးအကွိမျ နိုငျငံခွားခရီးစဉျအဖွဈ ဧပွီ ၂၄ ရကျက အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ ၊ ဂကြာတာ မွို့ကိုသှားရောကျခဲ့ပါတယျ။ မငျးအောငျလှိုငျနဲ့ တှဆေုံ့ရမယျ့ခရီးတခုကို
ပရာယှတျလှဲခြျောခဲ့တယျလို့ လူထငျစရာဖွဈခဲ့ပွီး ပရာယှတျကို လညျး လူတှဝေဖေနျခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး သူတို့နှဈယောကျကွားက ဆကျဆံရေးကိုသိရှိနသေူတယောကျရဲ့ ဖှငျ့ဟဝနျခံခကျြအရ မငျးအောငျလှိုငျကိုတှဖေို့ အတှကျ အာဆီယံထိပျသီးအစညျးအဝေးကို ပရာယှတျ သှားစရာ မလိုဘူး လို့ ပွောပါတယျ။ ပရာယှတျက စဈတပျကလာတဲ့ဝနျကွီးခြုပျတယောကျပါ။ ဒါကွောငျ့လညျး မွနျမာစဈတပျနဲ့နှီးနှယျပတျသကျနတေဲ့ ထိုငျးစဈတပျကရတဲ့ တိုကျရိုကျအကြိုးအမွတျတှကေို လှနျခဲ့တဲ့ဆယျစုနှဈကတညျးကစ ပွီး ပရာယှတျရရှိခဲ့ပါတယျ။
” ပရာယှတျ နဲ့ မငျးအောငျလှိုငျ လူခငျြးတှစေ့ရာမလိုဘဲနောကျဖေးပေါကျကတဆငျ့ဆကျသှယျနကွေတဲ့ ဆကျသှယျရေးပုံစံကို ကနြျော တို့ဆကျပွီး ထိနျးသိမျးထားပါတယျ။ အာဏာသိမျးပွီးခြိနျကစပွီး ဒီနညျးလမျးကိုအသုံးပွုခဲ့အတှကျ ဘယျလိုထိတှဆေ့ကျဆံရမယျဆိုတာ သူတို့ ၂ ယောကျစလုံးသဘောပေါကျကွတယျ ” လို့ အဆိုပါ အတှငျးရေးဖောကျခသြူက ပွောပါတယျ။
ဘာတှေ ဆှေးနှေးကွတယျဆိုတာကိုတော့ အဖွပေေးဖို့ ငွငျးဆနျခဲ့ပါတယျ။ အာဏာသိမျးမှုမတိုငျခငျကတညျးက ထိုငျးဝါရငျ့သံတမနျတှနေဲ့ မွနျမာ့နိုငျငံရေးသမားတှအေကွား စစေ့ပျညှိနှိုငျးမှုတှရှေိခဲ့ပွီး ခေါငျး ဆောငျနှဈဦးကွားက အသိရခကျတဲ့ဆကျဆံရေးကတော့ ပကျြစီးဆုံးရှုံးသှားစရာမရှိခဲ့ပါဘူး။ သူတို့အခငျြးခငျြးကောငျးကောငျးနား လညျနိုငျကွပွီး ရဲဘျော ရဲဘကျတှအေဖွဈ ယူဆထားကွတယျလို့. ထိုငျးသံအမတျဟောငျး Kobsak Chutikul ကပွောပါတယျ။ ထိုငျး နဲ့ မွနျမာစဈတပျအကွားမှာ
ရာထူးအဆငျ့အလိုကျဆကျဆံရေးတှရှေိနပေါတယျ။ ဒသေခံတပျမှူးအခငျြးခငျြး ၊နယျစပျဒသေတပျ မှူးအခငျြးခငျြးကနေ ဗဟိုစဈဦးစီးဌာနခြုပျကအမွငျ့ဆုံးအဆငျ့ထိ ဆကျဆံရေးရှိပါတယျ။ ၂၀၁၄ ၊ ထိုငျးနိုငျငံမှာ ပရာယှတျအာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး မငျးအောငျလှိုငျဟာ ပရာယှတျဆီကို ပထမဆုံးရောကျလာတဲ့ အရှေ့ တောငျအာရှက စဈဘကျဆိုငျရာ အကွီးအကဲတယောကျပါပဲ။ ပရာယှတျဆိုတာကလညျး ၂၀၁၄ ခုနှဈက ရှေးကောကျခံထိုငျးအစိုးရကိုဖွုတျခအြာဏာသိမျးယူခဲ့သူတယောကျဖွဈပွီး လိမျလညျလှညျ့ဖွားမှုတှနေဲ့
ထိုငျးစဈတပျဘကျယိမျးအစိုးရကို ဦးဆောငျခဲ့သူဖွဈပါ တယျ။ ထိုငျးစဈတပျအာဏာမသိမျးခငျ ၂ နှဈအစောပိုငျးကလညျး မငျးအောငျလှိုငျကို ထိုငျးဗိုလျခြုပျဟောငျး Prem Tinsulanonda ရဲ့ မှေးစားသားအဖွဈ ညှနျးဆိုခဲ့ဖူးပါတယျ။ ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာတော့ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးကို အမွငျ့ဆုံးတိုးမွှငျ့တဲ့အနနေဲ့ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ အမွငျ့ဆုံးသူရဲကောငျးဆုဖွဈတဲ့ ဆငျဖွူတျော ဂုဏျပွုဆု မငျးအောငျလှိုငျကို ခြီးမွှငျ့ခဲ့ပါသေးတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ဆယျနှဈကြျောကတော့ မွနျမာတပျမတျောကိုဆနျ့ကငျြတဲ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတှကေို ထိုငျးနယျစပျတလြှောကျမှာလုပျကိုငျခှငျ့ပေးထားပွီး တိုကျပှဲတှလေညျးဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီကာလတှတေုနျးကတော့ နှဈနိုငျငံစဈရေးတငျးမာမှု ကွီးထှားခဲ့တယျလို့ လုံခွုံရေးဆိုငျရာလလေ့ာသူတဦးက ပွောပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ဆကျဆံရေးက တခြိနျကသမိုငျးမှာသငျကွားခဲ့ရသလို ရနျငွိုးနဲ့မုနျးတီးမှုမြိုးတှမေဟုတျတော့ ဘဲ ပုဂ်ဂိုလျရေးအရခညျြနှောငျထားတဲ့ နှောငျကွိုးအထပျထပျနဲ့ အလှမျးသငျ့ဆကျဆံရေးမြိုးအဖွဈ သိသိသာသာပွောငျးလဲလာခဲ့ပါ တော့တယျ။
crd-ဘုနျးမောငျ Ref:Nikkei Asia